Website ရေးရန်အတွက် Volunteer ခေါ်ယူခြင်း — MYSTERY ZILLION
Website ရေးရန်အတွက် Volunteer ခေါ်ယူခြင်း
August 2012 edited August 2012 in Project
ကျွန်တော်က website တစ်ခုရေးရန်အတွက် Volunteer ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ website ရေးတယ်ဆိုပေမဲ့ php တို့ html တို့ web programming language တတ်ရန်မလိုပါဘူး။ www.webs.com က sub domain တစ်ခုနဲ့ website (blog included) ရေးမှာမို့ပါ။ website က computer technology တို့ computer tricks တို့ hacking တို့ software download အတွက်ပါ။ နာမည်ပေးတာတို့ ဘာတို့ကစ အတူတူတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရအောင်ပါ။ မြန်မာပြည်သူများအတွက် အကျိုးပြုစေရန် ရည်ရွယ်ချင်းဖြစ်သောကြောင့် developer သို့မဟုတ် စိတ်၀င်စားသူအားလုံးကို warmly welcome ပါပဲ။ [email protected] ကိုဆက်သွယ်ရန်။
PS: webpage ရေးရတာဘာမှတော့မခက်ပါဘူး။ Drag n drop ဘဲလုပ်ရမှာ။ ပါ၀င်ချင်ရင်တော့ ပေးထားတဲ့ အီးမေးကို mail ပို့လိုက်ပါ။ ဒီနေ့ ည ၁၂ နာရီလောက်အထိ ကျွန်တော် online ရှိနေမှာပါ။
I m very interested.How can i get in?
contact the email that I have provided. Thank you for your interest
[email protected] ကိုအီးမေးလ်ပို့ထားပါတယ် ။